Pictures na Articles Osụk site Visitors | Outboard Boat Motor Mmezi
Pictures na Articles Osụk site Visitors
Ọrụ ndị dị n'okpuru bụ site na saịtị ochie. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgwa anyị banyere oru gị, biko gaa na Onyeọbịa Project Comment Page ebe ị pụrụ bulite gị foto na-agwa anyị banyere gị oru ngo.
Ken Denman dere a magburu onwe isiokwu bụ "Ịzụlite ihe outboard nke Nchekwa"na Microsoft Word format.Ekele Ken, enwere m n'aka na ndị ọzọ ga-ahụ nke a bara uru.
Nke a bụ m okokụre '56 Lightwin, nlereanya 3018. Mere a zuru ezu na-akụ elu tinyere ọhụrụ akàrà ke ala unit. Ebe ọ bụ na tank nwere ọtụtụ kụkpọrọ ụgbọala na mbụ agba bụ na ezigbo njọ udi, m yipụ ya ala na dị nnọọ na-ese na tank na cowlings. M na-kpebiri megide ọhụrụ decals n'ihi ya m n'aka na-ese na tank ọta na akara efere. Nke a oké ọsọ obere kicker agabiga m 8 'n'ụgbọ epeepe na a mara ezigbo mma clip gburugburu Lake Kewoee ke edere edere South Carolina, n'ịkụ azụ maka bass na bluegill.
Enwere m '58 Johnson Seahorse 5.5hp outboard (foto agbakwunyere) nke nna m. Enwere m ike icheta na m na-eso ya gaa ụlọ ahịa egwuregwu na Milwaukee ịzụta ya ọhụrụ. Eleghị anya m agaghị adị ogologo karịa moto n'onwe ya. Ọ nọ na-egwuri egwu na ala m / ebe a na-agbagharị agbagharị, a dịghịkwa agba ọsọ na 25 + afọ ikpeazụ. Enweghị m ike ịnagide ya, ma na aka nke ọzọ, enweghi m ihe ngosi ebe ị ga-amalite iweghachi ya. Naanị m sụrụ ngọngọ na ebe nrụọrụ weebụ gị nke na-akọwa ọrụ nke gị na nkọwa zuru oke. Enweghị m ike ịmalite ịgwa gị otu aka nke a bụụrụ m. Naanị ịchọrọ ịkele gị maka oge na mgbalị ị na-etinye ihe ọmụma ahụ ọnụ. M ga-atụ anya na m ga-ebuteghachi ụgbọ mmiri m n'oge oyi a.
Hi Tom. N'anya saịtị. Daalụ maka enyemaka. Lee ụfọdụ eserese nke m 1964 Johnson 3HP. My nne nne m nyere m nke a moto na agadi faiba glaasi ụgbọ mmiri (eji nke nna nna m).
The moto bụ n'ọnọdụ dị mma. e overhauled na-ekiri elu a di na nwunye afọ gara aga. My Friend Mike na m enyocha ya nile. Naanị 2 ezigbo nsogbu na ya. The abụọ mbụ coils abụọ e ghere eghe. Ọzọkwa, ịghasa na impeller ụlọ e-anọdụ ala n'ụzọ nile, na-eme impeller inu ikuku na overheat na moto. Ofu ndị now ya oké !! M ga-mara ebe na-amalite ma ọ bụrụ na ọ bụ gị na saịtị.
Ekele, Aaron Publicover
Ana m ejikọta 2 foto nke moto m weghachite na-esote akwụkwọ weebụ gị ..... na-enwe nnukwu ọchị na agadi Gheenoe
na Johnson agba dị ka ọhụrụ .... isi anyị dị troll maka bass na agwa pearch.
M kwusịrị overhauling m moto eji gị n'isiokwu na chọrọ ka ị mara na ọ bụ ihe ịga nke ọma. The obodo marina kwuru na moto bụghị mgbalị ma na-eri na e hotara m $ 500 iji nweta ya na-agba ọsọ. M kwere m nwere banyere $ 120 n'ime ya na impeller, carb wughachi kit, ihe, condenser, coils, plọg na lube. Ndị a bụ ngwaahịa ihe. M nwere ike na-eche na inwe ya n'ime ọdọ na-ahụ ihe ọ ga-eme. Ọ malitere na nke mbụ esiri kwa! Nke a moto bụ nwunye m nna nna nke na-agba ọsọ na banyere 40 afọ, ya bụ nwanne nna ya na ọ echekwara na ya n'okpuru, ọ n'ezie nwere mmanụ ụgbọala ma ọ bụ ihe bụ mmanụ na otu oge, na tank. Daalụ maka website, ọ nyeere m aka otu nza, mere ka ọ dị nnọọ mfe ime.
6 awa 16 nkeji gara aga
9 awa 25 nkeji gara aga
23 awa 56 nkeji gara aga